I-Charred Lake Luxury Cabin
(80 okushiwo abanye)
Ifakwe phakathi kwamahektha ayi-1.75 amaphayini avuthiwe phansi endaweni eseceleni echibini lomphakathi, uzothola leli khabethe lesimanje elishisiwe. Ngesiqhingi esingu-11 ft, indawo yokupheka yegesi, izinto zikagesi ze-GE Cafe, nazo zonke izinsiza zasekhaya, uzokwazi ukupheka ukudla okumnandi uma ufuna ukuhlala futhi ujabulele imvelo. 1500 SF deck w/ pool/ping pong table, igrill eyakhelwe ngaphakathi, usinki nesiqandisi se-bev, indawo yomlilo yegesi yangaphakathi nengaphandle, umgodi womlilo nobhavu oshisayo. Amakamelo okulala ama-3, okugeza okuyi-3.1, iwasha/isomisi esiphindwe kabili. I-BOAT SLIP IYATHOLAKALA NGEMALI YE-ADD'L.
Indawo yokuhlala yangaphandle enegrill yegesi eyakhelwe ngaphakathi, usinki, indawo yomlilo yegesi yangaphakathi nangaphandle (etholakala ngezikhathi ezithile zonyaka), ama-TV, (DirectTV) itafula lephuli, itafula le-ping pong kanye nobhavu oshisayo.
Ikhishi ligcwele ngokugcwele sengathi usekhaya lakho. Sihlinzeka ngebhodwe lekhofi eliconsisa izinkomishi eziyi-12 kanye nomenzi wekhofi we-Keurig. Kukhona i-Instant Pot ephinde ibe yi-air fryer.
Isikhathi esingaphansi kwe-grill kumele sivulwe ngaphambi kokuthi i-grill ivutha. Kukhona nesibali sikhathi sazo zombili izindawo zomlilo futhi.
I-shampoo, i-conditioner, insipho yebha (ngaphansi kukasinki wokugezela) namalineni anikeziwe.
Ukuze usebenzise isistimu ye-stereo yangaphandle, vele ucindezele inkinobho ye-bluetooth phezulu kwesokunxele sesamukeli esingaphandle futhi uvumelanise nefoni yakho noma idivayisi oyikhethayo. Ungakwazi futhi ukudlala emoyeni kuma-TV aphilayo/e-patio.
4.98(80 okushiwo abanye)
4.98 · 80 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-80
I-Lost Creek Subdivision iseduze nezindawo zokudlela zase-Hochatown (ngaphesheya kwe-Hochatown Saloon e-Lost Creek) nokho inikeza umuzwa wokucashile njengoba phambilini bekuyihlathi likaphayini legceke lendawo lamapulangwe futhi zonke izinkatho zingamahektha ayi-1.5-2.5, ngakho-ke indawo eningi nezihlahla. phakathi kwemizi.
Asihlali endaweni kodwa siyatholakala ngocingo/ngombhalo noma ngemiyalezo ye-Airbnb noma nini lapho uhlala khona.